Waa maxay qorshaha madaxweyne Farmaajo ee Nairobi? | Saxil News Network
Waa maxay qorshaha madaxweyne Farmaajo ee Nairobi?
Muqdisho[Saxilnews.com]Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayay Kenya uga billaabatay maanta saddex maalmood oo booqasho rasmi ah. Haddaba waa maxay qorshaha madaxweynuhu?
Haddaba waa maxay qorshaha madaxweynuhu?
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu la kulmi doonaa dhigiisa dalka Kenya, Uhuru Kenyatta maanta oo Khamiis ah. waxaana la filayaa in ay isla soo qaadaan arrimo ay ka mid yihiin ammaanka, qaxootiga, iyo abaaraha.
Waxa lagu wadaa in labada madaxweyne ay si wada jir ah u qabtaan shir jaraa’id. Waa booqashadii rasmiga ahayd ee u horaysay ee Madaxweyne Farmaajo ku yimaado Kenya.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya waxaa la filayaa in uu ka qeyb galo kullan gaar ah oo madaxda waddamada IGAD ku yeelan doonaan Nairobi maalinta Sabtida ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayay Kenya uga billaabatay maanta saddex maalmood oo booqasho rasmi ah. Haddaba waa maxay qorshaha madaxweynuhu?
Kullankan IGAD oo ay sidoo kale riixayso hay’adda Qaramada Midoobay ee Qaxootiga ee UNHCR ayaa waxa la filayaa in la isku waydaarsado fikrado ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo abaari karo arrinta dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ku sugan.
Balse su’aasha la isweydiinayo ayaa ah qaxootiga dib ma loogu celin karaa Soomaaliya xilligan oo dalka ay ka jiraan abaaro iyo cabsi ah in ay dhacdo macaluul.